उच्च प्रविधिको उमेर मा केही मानिसहरू VCRs प्रयोग गर्नुहोस्। तथापि, लगभग सबैलाई एक टेप कि आफ्नो मालिकको लागि महत्त्वपूर्ण छन् भनेर विभिन्न रेकर्ड समावेश छ। तपाईं थाह छ, समय, भिडियो गुणस्तर अपमानित छ। त्यसैले, तपाईंले यी सडक लेख्न भने तिनीहरू डिजीटल हुनुपर्छ। यस लेखमा तपाईं कसरी कम्प्युटरमा एक भिडियो टेप प्रतिलिपि गर्न सिक्न हुनेछ।
निस्सन्देह, तपाईं लागू गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं के गर्न लागि सबै के गर्ने विशेषज्ञहरु, तर वास्तवमा भिडियो स्याचुरेसन अब महंगा छ भन्ने छ। तपाईं digitize गर्न आवश्यक छ कि रेकर्ड धेरै छ भने, तपाईँले भुक्तानी गर्न यो एक ठूलो राशि छ लागि छ। तपाईं निःशुल्क डिस्क भिडियो टेप देखि रेकर्ड गर्न कसरी सिक्न सक्छौं भने तर किन पैसा खर्च?
यो प्रक्रिया को लागि, हामी आवश्यक:
विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम संग 1 कम्प्यूटर। यसबाहेक, तपाईं यसलाई केही खास आवश्यकताहरू पूरा गर्न छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। लागि कार्य पूरा सामान्य कार्यालय कम्प्युटर काम गर्ने छैन।
तपाईं आफ्नो कम्प्युटर गर्न भिडियो टेप लेखन 2. अघि, तपाईंले गरेनन् अघि भने, टिभी-ट्युनर खरिद गर्न आवश्यक हुनेछ। मूल्यहरु तुलना गर्ने ट्युनर को स्याचुरेसन लागि धेरै महँगो हुँदैन - 1000 rubles सम्म। उपकरण स्थापना कुनै फरक जटिलता छ। टिभी-ट्युनर सामान्य बोर्ड जस्तो देखिन्छ। यो स्थापना गर्न, तपाईं सिस्टम आवरण (यसलाई बन्द गरिएको छ पहिले कि), उपयुक्त कार्ड स्लट सम्मिलित खोल्न आवश्यक, यो सुरक्षित। कि पछि, तपाईं हार्डवेयर लागि चालक स्थापना गर्न आवश्यक हुनेछ। पनि यो टिभी-ट्युनर केही युएसबी-इन्टरफेस मार्फत काम गर्दछ उल्लेख गर्नुपर्छ।
3. कसरी डिस्क वा अन्य कुनै पनि मध्यम मा भिडियो टेप प्रतिलिपि गर्न थाह पाएर तपाईं अन्य उपकरण को हेरचाह गर्न आवश्यक - वीसीआर वा Camcorder। सबै भिडियो क्यासेट तपाईं digitize जाँदैछन् को आकार मा निर्भर गर्दछ।
4 तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको भिडियो टेप लेखन अघि, तपाईंले सम्पादन वा भिडियो रेकर्ड गर्न डिजाइन एक कार्यक्रम स्थापित गरेको निश्चित गर्नुहोस्। यो कार्य फिट विन्डोज चलचित्र निर्माता, Movavi, Cyberlink पावर निर्देशक र अरूलाई गर्न।
टिभी-ट्युनर देखि5एडेप्टर। तिनीहरूले सामान्यतया उत्तरार्द्ध संग एक सेट रूपमा बेचिन्छ।
त्यसैले, माथिका सबै प्राप्त, तपाईं भिडियो कैसेट देखि रेकर्डिङको digitize गर्न तयार छन्।
टिभी-ट्युनर स्थापना पछि वीसीआर वा एडेप्टर को माध्यम द्वारा अन्तिम कोठामा जडान गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईं को एक चलाउन आवश्यक स्थापित कार्यक्रम। भिडियो सम्पादक तपाईं पहिलो को मापदण्डहरु सेट गर्न आवश्यक : भिडियो खिच्न अडियो सेटिङहरू, रंग गहिराई, फ्रेम दर, आदि तपाईं आफ्नो कम्प्युटर गर्न भिडियो टेप अधिलेखन अघि, अर्डर गुणस्तर कब्जा गर्न केही मापदण्डहरु को मूल्य पत्ता लगाउन सिफारिस गरिएको छ उच्चतम थियो।
त्यसपछि तपाईं आवश्यक खेलाडी (वीसीआर वा क्यामेरा) र आफ्नो कम्प्युटरमा सम्पादक सुरु गर्न। digitizing थाल्छन्। रेकर्डिङ समयमा, यो तपाईँको कम्प्युटरमा कुनै पनि थप कार्यक्रम सुरु र तिनीहरूलाई रमाइलो गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
रेकर्डिङ पछि, फाइल बचत गर्न भूल छैन। पनि तपाईंलाई प्रयोग गर्दै कार्यक्रम को क्षमताहरु मिलाउनका लागि परिणामस्वरूप भिडियो सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।
विन्डोज 8 मा कार्यक्रम हटाउनुहोस्: को विधि र निर्देशन
Nit: यो के हो, यो कसरी देखिन्छ, यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ? नटहरूको लागि उपाय
रूस को तारा: जन्तरको को मूल्य र प्रतीकको एउटा टाटु
"प्रमोदवनमा" (भोज हल, मास्को): विवरण, ठेगाना
गर्भावस्था को समयमा Enema। हानि वा लाभ उठाउन?
Sawdust बढ्छ उत्पादकत्व संग Mulching